Xaaladda Ka Taagan Itoobiya Ma Horseedi Kartaa Inuu Dalkaasi Kala Go’o? | Kaafi News
Xaaladda Ka Taagan Itoobiya Ma Horseedi Kartaa Inuu Dalkaasi Kala Go’o?
Dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in xaalad degdeg ah oo lix bilood qaadan doonta la geliyay gobolka waqooyiga dalkaas ku yaalla ee Tigray. Golaha wasiirrada ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in xaaladdan degdegga ah looga gol leeyahay in “lagu sugo nabadda, badqabka iyo ammaanka shacabka iyo si looga hortago falal dalka u horseedi kara qas iyo xasilooni darro”.Wuxuu goluhu sheegay in xaaladda gobolka Tigray aanan “lagu xakameyn karin xoojinta sharciga ee caadiga ah”.
Tallaabadan ayaa ka dambeysay cadho ka dhalatay weerar ay maleyshiyaad kasoo jeeda Tigray-ga ku qaadeen saldhig milatari.
Rai’sul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa weerarkaas kaddib amar ku bixiyay in militariga dalkiisa in ay gutaan waajibadkooda ah in dalka iyo dadka la badbaadiyo, islamarkana ay tallaabo ka qaadaan gobolka Tigrayga oo ku eedeeyay inay dagaal billaabeen.
Rai’sul wasaaraha ayaa xisbiga TPLF ku eedeeyay inay weerareen saldhig militari oo ku yaalla gobolka, isagoo arrintaas ku tilmaamay mid looga gudbay xadkii ugu dambeeyay ee dulqaadka.
TPLF ayaa horey waxay ugu eedeeyeen maamulka Abiy in uu marmarsiiyo ka dhiganayo feyriska Corona si uu xilka usii heysto maadama waqtigiisu uu ku ekaa bishii October.
Qoraalka sawirka,Dadka deegaanka ma heystaan koronto, khadka telefoonka ama adeeg internet toona
Maxa dhaheen madaxda Tigray-ga?
Mid ka mid ah saraakiisha maxalliga ah ayaa sheegay in ciidamada federaalka ee Itoobiya gobolkaas ka joogay ay goosteen, laakiin warkaas wali si rasmi ah looma xaqiijinin.
Qoraalka sawirka,Qaar ka mid ah meheradaha ganacsiga ee magaalada Mekelle ayaa la xiray
Isbuucii lasoo dhaafay, hoggaamiyeyaasha Tigray ayaa is hor taagay janaraal uu Abiy Axmed u magacaabay ciidamada milatariga ee gobolkaas jooga.
Waxay tallaabadaas ku sheegeen maadaama uusan Ra’iisul Wasaaruhu hadda gacanta ku heynin maamulkooda.
“Waligeen xabadda kuma hormari doonno, mana noqon doonno kuwa looga hormaro,” ayuu yiri Getachew Reda, oo xubin sare ka ah xisbiga TPLF, mar uu isbuucii hore la hadlayay wakaaladda wararka ee AFP.
Waddanka ma wuxuu qarka u saaran yahay inuu kala go’o?
Qoraalka sawirka,Rai’sul wasaaraha Itoobiya
XIGASHADA SAWIRKA,TIGRAY COMM. OFFI.
Waxay siyaasiyiinta gobolkaas sheegeen in Golaha Federeeshiinka ee degaanka Tigreega uu si ka duwan deegaannada kale uu u qabsanayo doorashadiisa.
Abiy Axmed: “dowaladdeyda daciif maahee shacabka ayey u tureysaa”
XIGASHADA SAWIRKA,EPRDF OFFICIAL
Waxay Dr Abiy Axmed ku eedeeyeen inuu isku dayayo sidii uu “ku sameysan lahaa dowlad sal adag”.
Ra’isal wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay inay dowladdu qaadeyso tallaabbo kasta oo ay kaga hortageyso dhaqdhaqaqyada dastuurka dalka ka hor imaanaya.
Dr Abiy Axmed oo ka jawaabayay hadalka ka soo yeeray deegaanka Tigreeda oo ahaa in ay doorasho gaar ah deegaan ahaan u qabsanayaan islamarkaana aysan sugeynin doorashada guud ee dib loo dhigay wuxuua yiri:
“Dhaqdhaqaaq kasta oo ka hormarinaya dastuurka dalka waa khalad aad u weyn waxayna xadgudub ku tahay shuruucda dalka iyo kuwa caalamka intaba.”
“Sida uu dhigayo dastuurka dalka Itoobiya qodobkiisa 50-aad ee faahfaahinaya awoodda iyo waajibaadka dowladda federaalka, waa inaan dastuurka difaacno, waxkasta oo ka horimanayana aan ka hortagno, diyaar ayaan u nahay taas” ayuu yiri.
Qoraalka sawirka,Guddoomiyaha Guddiga doorashada qaranka ee dalka Itoobiya Birtukaan Mideqsa
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ee dalka Itoobiya Birtukaan Mideqsa oo warbaahinta dalkaasi la hadashay ayaa sheegtay in hadalka ka soo yeeray deegaanka Tigreega inuu la yaab ku noqday uuna yahay mid sharci darro ah.
“Sida uu dhigayo dastuurka dalka Itoobiya qodobkiisa 102-aad, arrimaha doorashada waxaa awood u leh guddiga doorashooyinka qaranka oo kaliya” ayay tiri.
“Doorashada heerarkeeda kala duwan waxaa qabanaya oo wakhtiga la qabanayana go’aan ka gaari kara guddiga doorashooyinka qarnaka ee dalka Itoobiya.”
Itoobiya oo “fashilisay weerarro ay al-shabaab qorsheysay”
“Deegaan wuxuu doorasho si gaar ah u qabsan karaa marka uu codsigiisa soo gaarsiiyo guddiga doorashooyinka, guddiguna uu oggolaado codsiga deegaanka oo keli ah, balse ma jiro ilaa iyo hadda deegaan codsi doorasho soo gaarsiisay guddiga doorashooyinka. Xilli dalka Itoobiya uu ku jiro xaalad degdeg ah oo uu la tacaalayo cudurka safmarka ee Covid-19 in deegaan xubin ka ah dowladda Federaalka uu sheego inuu doorasho qabsanayo waa nasiib darro,” ayey tiri guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ee dalka Itoobiya Birtukaan Mideqsa.